Mmiri ụzụ | Rayson
Rayson na Rayson Mpaghara, Huasha Road, Shashan, Foshan High South Mpaghara, Guangdong, China. Isi Ngwaahịa Ọkachamara ọkachamara na-akụ ezigbo ụgwọ ahịa na ndị na-emepụta igbe. Nkwalite ezigbo ego dị na igbe dị mma nke Rayson na-arụ ọrụ na nzọụkwụ nke ọ bụla nke usoro mmepụta, ọkachasị nhọrọ nke ihe elastomer. A na-eduzi ule dị iche iche maka Rayson. Ha bụ ule nnwale nke nje, na-enyocha ule na-eto eto, mmiri na-eme ihe, na-emesi ike na nnwale. Nkwalite ezigbo ọnụahịa na-ekere òkè na igbe Ngwaahịa ngwaahịa dị ukwuu. Ejiri ihe siri ike na ihe ndị siri ike, ọ nwere ike iguzo na ihu igwe siri ike, ujo, mkpagharị, na nhụgharị.
N'ịdabere na teknụzụ dị elu, ezigbo ike nrụpụta, na ozi zuru oke, Rayson na-ebute ụzọ ugbu a ma na-agbasa rayon anyị n'ụwa niile. Yana ngwaahịa anyị, a na-enyekwa ọrụ anyị ka ọ bụrụ ọkwa kachasị elu. N'oge opupu ihe ubi, anyị na-etinye ego ọtụtụ na ngwaahịa R & D, nke na-eme ka ọ dị mma na anyị zụlitere akwa ụdọ mmiri. N'ịdabere na ndị ọrụ na-arụ ọrụ na ndị ọrụ anyị, anyị na-ekwe nkwa na anyị na-enye ndị ahịa ngwaahịa kachasị mma, ọnụahịa kachasị mma, na ọrụ kachasị mma. Nabata ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla .Ọ bụ atụmatụ ngwaahịa atụmatụ mmetụta na-emetụta. Ihe eji eme ya nwere ikike inye nsogbu na nchedo site na itinye ume nke nkpagbu ma obu ujo.